Soomaaliland oo xabsiga ka sii deysay Boqor Buurmadow. – Hornafrik Media Network
Hornafrik-Boqorka wuxuu xabsiga ku jiray muddo laba bilood ku dhow, waxaana iminka lagu soo daayey cafis madaxweyne sida uu BBC u sheegay afhayeenka madaxtooyada jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax banaanida ee Somaliland, Maxamuud Warsame.
Boqor Buurmadow oo magaalada Hargeysa ku xirnaa tan iyo wakhtigaas ayaa Somaliland waxay ku eedeeysay in munaasabad dhaqameed uu boqorku kaga qayb galay Puntland bartamihii Abriil “oo uu kaga hadlay khudbad wiiqaysay gooni isutaagga Somaliland iyo ciidamadeeda.”
Boqor Cismaan Aw Maxamuud (Buurmadow) oo markii la soo daayey ka dib BBC la hadlay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay sii deyntiisa, uuna ka mahad naqaayo sidii loola dhaqmay intii uu xabsiga ku jiray, laakinse hadal intaa dhaafsiisan ma uusam sheegin.
Maxkamad ku taalla haragaysa ayaa boqor Buurmadow marlkii hore ku xukuntay 5 sano oo xabsi, hase yeeshee markii uu racfaan ka qaatay ka dib ayaa xukunka laga khafiifiyey, ayadoo laga dhigay 3 sano oo xabsi ah
Qareennada u doodayey Boqor Buurmadow ayaa ku celcelinayey in xukunkiisa uusan caddaalad ahayn.
taliyaal cusub oo loo magacaabay saldhigyada degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir.